Home » သတင်း » Bluefish444 Avid မီဒီယာComposer®မှ SMPTE 2022 IP ကို ​​Capture အ Add
Bluefish444 Avid မီဒီယာComposer®မှ SMPTE 2022 IP ကို ​​Capture အ Add
အသစ်က IP ကိုဗီဒီယိုမှ Capture များအတွက် Bluefish444 SDI I / O ထောက်ခံမှုနှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer
မြောက်အမေရိကမဲလ်ဘုန်းမြို့သြစတြေးလျ, စက်တင်ဘာလ 1, 2017 - Bluefish444ယင်းစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး၏ထုတ်လုပ်သူ 4K SDI, asi, ဗီဒီယိုကျော်အိုင်ပီ & uncompressed HDMI I / O ကတ်များနှင့် mini ကို converters အဖြစ်, ထိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းများအတွက်, ကိုကြေညာ SMPTE စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Post-ထုတ်လုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲ 2022 ဖမ်းယူထောက်ခံမှု, avid မီဒီယာ Composer.
Bluefish444 များအတွက်ထောက်ခံမှုဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ဆက်လက် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer တည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲ။ နောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်ထံမှဖမ်းဆီးဖို့ Bluefish444 ဖောက်သည်ဖွ SMPTE 2022-6 ဗီဒီယိုကျော် IP ကိုစံ Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း 10Gb ကွန်ယက် interface ကိုကဒ်များ (NIC) ကို အသုံးပြု. စီး။ SDI /HDMI ဗီဒီယိုကို I / O တွင်အပြည့်အစုံနှင့်အတူထောက်ခံနေသည် ယုဂ် ဗီဒီယိုကိုကဒ်များမိသားစု။
အဘို့အ Bluefish444 ပွင့်လင်း IO ထောက်ခံမှု လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer ပါဝင်သည်:
4K / 2K /HD/ SD ကဗီဒီယို Mode
3G / 1.5G / SD က-SDI Input နဲ့ Output
SMPTE 2022-6 1.5G Capture အ
4K / 2K /HD/ SD က HDMI preview နှင့်အတူ ယုဂ် | 4K နျူထရွန်
50K / 59K မှာမြင့်မားတဲ့ Frame ကနှုန်း 60 /4/ 2fps ထောက်ခံမှု /HD
48K / 4K မှာ 2FPS ထောက်ခံမှု
အတူဆက်လက်လက်တွဲ လွန်စွာလိုလားသော Bluefish444 အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို SDI ရောက်စေဖို့ခွင့်ပြု /HDMI စက်မှုလုပ်ငန်းစံဗီဒီယို I / O ဟာ့ဒ်ဝဲ လွန်စွာလိုလားသော ယခု 4K UHD နှင့် 2K ဗီဒီယိုက Modes သာနှင့်အတူပလက်ဖောင်းကိုတည်းဖြတ်မီဒီယာ Composer ဗီဒီယို, ။ ဒများအပြင် SMPTE 2022-6 တည်ဆဲယုဂ်ဖောက်သည်ကိုဖမ်းယူလယ်ပြင်၌အကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၏အပျနှံဖို့သေတမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။
Bluefish444 ထောက်ခံမှု I / O အတွင်းအပြည့်အဝ-featured ဇာတိကဗီဒီယိုပေးအသုံးပြုပုံ Real-time ကိုဗီဒီယို Workflows တီထွင်ဆက်လက် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer အဖြစ်ပေးအပ် IngeSTore Multi-ရုပ်သံလိုင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖမ်းယူဆော့ဖ်ဝဲ, နှင့်သဟဇာတ လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer ။
"Bluefish444 ၏ထို့အပြင်ကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူ SMPTE 2022-6 အဆိုပါ Bluefish444 ပွင့်လင်း IO plugin ကိုမှဖမ်းယူ "တွမ် Lithgow, Bluefish444 မှာကုန်ပစ္စည်း Manager ကမှတ်ချက်ပေး။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုလည်းပေါင်းစပ်စဉ်အခါ, တည်ဆဲယုဂ်နျူထရွန်များနှင့်ဆူပါနိုဗာ SDI ဖြေရှင်းချက်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါလိမ့်မည် SMPTE 2022-6 သူတို့ရဲ့သို့ဖမ်းယူ လွန်စွာလိုလားသော Workflows ။ "
Bluefish444 4K SDI /HDMI အထောက်အပံ့ လွန်စွာလိုလားသော Windows နှင့် MacOS ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်မီဒီယာ Composer ရပ်တည်ချက်အပေါ်သရုပ်ပြပါလိမ့်မည် 7.J07 at IBC ပြရန် 2017.
ဖြတ်. နေရာတိုင်းမှာ avid ™, လွန်စွာလိုလားသော အများဆုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောမီဒီယာပလက်ဖောင်းပူးပေါင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စားသုံးမှုနှင့်အတူအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကိုဆက်သွယ်ထားသော, ကယ်တင်တတ်၏။ လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုဉီးဖောက်သည်အသိုင်းအဝိုင်းအသုံးပြုမှု လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုအများဆုံးချစ်ပြီးမီဒီယာကိုနားထောငျကမ်ဘာ-ထံမှဂုဏ်သတင်းနှင့်ဆုရ feature ကိုရုပ်ရှင်ထဲတွင်လူကြိုက်များရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများ, သတင်းအစီအစဉ်များနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအားကစားဖြစ်ရပ်များနှင့်တေးဂီတကိုကျင်းပ, watched ဖန်တီးဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ငွေရှာခြင်းပြည့်စုံသောကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများ အသံသွင်းခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲ။ အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်း options များနှင့်အတူ, လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ဖြေရှင်းချက် Pro ကိုTools®, မီဒီယာComposer®, ပါဝင်သည် လွန်စွာလိုလားသော NEXIS®, Interplay®, ProSet ™နှင့် RealSet ™, Maestro ™, ကစားကွက်ဖန်တီးရှင်™နှင့်Sibelius®။ အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက လွန်စွာလိုလားသော ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, အလည်အပတ်ခရီး www.avid.com.
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Bluefish444 မြောက်အမေရိကမဲလ်ဘုန်းမြို့သြစတြေးလျအခြေစိုက်ထားတဲ့ Bluefish Technologies က Pty Ltd. , ၏ဌာနခွဲများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်တကမ္ဘာလုံး OEMs ကုန်သည်တွေနှင့် System Integration တစ်ခုကျယ်ပြန့်ရောင်းအားရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်ဖြန့်ဝေနေကြသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များခရီးစဉ် bluefish444.com
Latest posts by Daniel Harris (အားလုံးကြည့်ရှု)
Brainstorm partners with Bluefish444 for its main demonstration at Broadcast Asia - ဇွန်လ 19, 2018
Ideal Systems demonstrate Bluefish444 KRONOS and IngeSTore Server 3G at BroadcastAsia 2018 - ဇွန်လ 18, 2018
Bluefish444 IngeSTore, Edit-While-Record and NDI™ at BroadcastAsia 2018 - ဇွန်လ 13, 2018
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SoftAtHome, MStar, CES2017 တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-09-01
ယခင်: အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသော Shot ရှာဖွေနေပါသလား ဒါဟာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူစတင်။
နောက်တစ်ခု: Technicolor Baselight နှင့်အတူဒတ်ခ်ျရွှေအသက်အရွယ်သို့ Tulip ဖျားနာကြာ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Bluefish444 Avid မီဒီယာComposer®မှ SMPTE 2022 IP ကို ​​Capture အ Add" ။ http://www.broadcastbeat.com/bluefish444-add-smpte-2022-ip-capture-to-avid-media-composer/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။